११ मा पढ्ने युवतीले अ’बैध सम्बन्धबाट जन्मेको बच्चालाई ट्वाइलेटमा फालेपछि… अस्पतालमा भयो ह’ल्लीख’ल्ली – Paluwa Khabar
११ मा पढ्ने युवतीले अ’बैध सम्बन्धबाट जन्मेको बच्चालाई ट्वाइलेटमा फालेपछि… अस्पतालमा भयो ह’ल्लीख’ल्ली
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रबार 36
काठमाडौँ । कक्षा ११ पढ्ने एक किशोरी पेट दु’ख्ने स’मस्या लिएर अस्पताल पुगेकी थिइन्। अस्पतालमा पुगेकी उनले बाथरुममा शिशुलाई जन्म दिइन्। अ’सु’रक्षित प्रसवका कारण जन्मिएपछि शिशुको नि’धन भएको हो।
घ’टना सार्वजनिक भएपछि किशोरीका परिवारजन अचम्मित बनेका छन्। किशोरी अविवाहित हुन्। घ’टनाका बारेमा जानकारी पाएपछि अस्पताल पुगेको प्रहरीले उक्त घ’टनाका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
यो सबै घ’टना छात्राबासकी अध्यक्ष हेमलता नागका अगाडि भएको हो। उनले उक्त घ’टना द’बाउनका लागि झु’ट बोलेको समाचारमा उल्लेख छ। जस कारण उनलाई निलम्बन पनि गरिएको छ। रिर्पोटका अनुसार १७ वर्षीया छात्रालाई बुधबार पेटको स’मस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। जहाँ उनले एक मृ त बच्चालाई जन्म दिइन्।
छोरी गर्भवती भएको र उनले एक मृ त बच्चालाई जन्म दिएको घ’ट’ना थाहा पाएपछि परिवार अचम्मित बनेका छन्। मामिला प्रेमको हो। रिर्पोटका अनुसार युवतीले दुई वर्षदेखि आफू गाउँकै एक युवकसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको बताएकी थिइन्। अस्पताल प्रशासनले मृ त शिशु युवतीको आमाबाबुलाई जिम्मा लगाएको छ। प्रहरीका अनुसार घ’टनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख छ।
Prevड्राेन क्यामरा प्रयाेग गर्दा थाहा पाउनु पर्ने नियम
Nextपाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन, कार्तिक १५ गते शनिबार, को राशिफल पढ्नुहोस
धेरै समय चुप बसेकी भारतीय चेली सरिता गिरीको बल्ल बोली फु’ ट्यो, भारतबाटै यस्तो घो’ षणा गरेपछि नेपाल त’ रंगित !
अष्ट्रेलियामा भेट्टियो अति अनौठो जीव ,विशेषता थाहा पाउँदा बैज्ञानिकहरु हैरान
यिनै हुन् नेपालकै सबैभन्दा कान्छी पाईलट जसले १८ बर्षको कलिलो उमेरमा नै आकाशमा जहाज उडाउछिन
प्रचण्ड र बाबुरामले गलत बाटो लिए, धुलोपिठो भए : ‘विप्लव’
१.	भद्रकालीमा धर्ती माताको आठौ दिनमा यस्तो अनौठो भयो, माता नाग बनेपछि हेरेको हेरै भए सबै(भिडियो) (41)
२.	श्रीमानले फकाएर घर ल्याएको केहि दिनमै २५ बर्षिय गर्भवती रुपाको रहस्यमय मृ’त्यु (37)
३.	कञ्चनपुरमा एम्बुलेन्सले ठ’क्कर दिँदा साइकल यात्री ४५ वर्षीय कृष्णबहादुरको मृ’त्यु’ (37)